mairie-antananarivo – Hain-trano teny Mahavoky tokantrano 70 no indray tra-boina
auteur 1 septambra 2017 Commentaires fermés
Nisehoana tranga na hain-trano mahatsiravona teny amin’ny fokontany Mahavoky, Boriboritany Fahatelo, ny Alakamisy 31 Aogositra 2017 tokony ho tamin’ny 7 ora hariva.
Trano hazo miisa 40 sy trano biriky 4 no indray may nandritra izany ka olona miisa 387 izany hoe tokantrano 70 no indray tra-boina.Raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso dia trano hazo iray no nanomboka nirehitra ka nitatra teo amin’ny manodidina.Kila forehitra avokoa ny entana rehetra tamin’ireo trano ireo .Eny fa na ny vola sy ireo antotan-taratasim-panjakana ilaina samihafa dia may avokoa.
Tsiahivina fa tsy misy ny aina nafoy tamin’izany fa olona roa no naratra mafy ka naiditra hopitaly. Ny toerana dia somary teritery ka nanano-sarotra ny fidiran’ny mpamonjy voina kanefa fiaraben’ny mpamonjy voina feno rano miisa 4 no efa nanatanteraka ny famonoana ny afo izay tsy nitsahatra raha tsy tamin’ny 11 ora alina.
Ny zaza amam-behivavy dia nalefan’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny fokontany tao amin’ny EPP Andravoahangy I.Nandritra izany sehon-javatra izany dia voatery notapahan’ny JIRAMA ihany koa ny herinaratra mba hisorohana ny zava-doza mety hitranga.
Eto dia manentana ny vahoaka rehetra ireo tompon’andraikitra mba ho mailo sy hitandrina hatrany amin’ny fampiasana ny afo.